एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा बसेको मेरियट होटल स्वागत नेपालको पार्टीको कब्जामा ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा बसेको मेरियट होटल स्वागत नेपालको पार्टीको कब्जामा !
मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिामा सुमार बसेको होटल उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीका कार्यकर्ताले कब्जा गरेका छन् ।
उनीहरुले अघि नै बुक गरेको पार्टीका अध्यक्ष स्वागत नेपालले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिएका छन् ।
‘फातिमा सुमार बसेको होटेल मेरिओटमा हामी दर्जनौंको संख्यामा प्रवेश गरिसक्यौं हामीले पनि सो होटेल उहाँले जस्तै पहिल्यै बुक गरेका थियौं,’ नेपालले भने,‘हामी उहाँलाई तत्काल एमसीसी प्रस्ताव खारेज भएको घोषणा गर्न आग्रह गर्दछौं । उहाँ लोकतान्त्रिक देशको हो भने हाम्रो शान्तिपूर्ण प्रस्ताव उहाँले स्वीकार गर्नुहुनेछ ।
एमाले सांसदको चेतावनी अग्नी सापकोटाको टाउको फुटाउँन मन थियो
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले नाराबाजी र अवरोध गरिरहँदा पेलेर संसद चलाउँने सभामुख अग्नी सापकोटा विरुद्ध एमाले सांसदहरु उग्र आक्रोसीत भएका छन् ।
शुक्रबार बसेको संसद बैठकमा एमाले सांसदलेको अवरोधबीच विभिन्न अध्यादेश पेश गरिएको छ भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक पनि पेश गरिसकेका छन्।
यी सबै काम एमालेका सांसदहरु आशनबाट उठेर रोष्ट्रम घेराउ गर्दै नाराबाजी गरिरहँदा भएका हुन्। सभामुखको भूमिकालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सांसदहरुले आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्।
यस्तै एकजना सांसद हुन् एमाले सांसद रेखा झा। उनले शुक्रबारको बैठकमा सभामुख सापकोटातिर हान्न आसनको माइक नै तानेकी थिइन्। तर त्यसलाई मर्यादापालकहरुले रोकिदिएका थिए। उनले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मिलेको भए सभामुखको टाउकोमा हान्ने बताइन्।
‘मिलेको भए त्यही माइकले म सभामुखको टाउकोमा हान्थेँ। सभामुखले संसदीय मर्यादा कायम राखेनन्’, उनले भनिन्, ‘अब मौका पाएँ भने म सभामुखको टाउकोमा हान्छु।’
उनले दलले ह्विप उलंघन गर्ने सांसदलाई कारबाही गर्न पाउने जिकिर गरिन्। ‘दलले सांसदलाई कारबाही गर्न पाउँछन्। तर सभामुखले माओवादीको निर्णय हतार हतार कार्यान्वयन गरे। एमालेको निर्णयलाई त्यतिकै राखेर अन्तिममा कारबाही नगर्ने निर्णय लिए।’
नियम कानुन उलंघन गर्नेलाई हान्दा फरक नपर्ने उनले बताइन्। ‘सभामुखखले संसदीय मर्यादा कसले कायम गर्न सकेनन्,’ उनले भनिन्, ‘हामीले आज त माइक मात्रै तान्यौँ, अब मौका मिल्यो भने सभामुखलाई हान्छौँ।